Nyore Matanho mashanu Cloud Migration Strategy - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
gore kutama ndiko kutamisa maapplication uye data kune iyo gore. A gore Kutama nzira inokubatsira kushandisa maapplication ari nani fomu uye chengetedza data rako paunenge uchifamba. Nekudaro, maitiro aya anogona kunge akaomarara sezvo zvichida kuronga kwakakodzera, kuuraya, uye kuyedza. Saka pane izvi, pane nhanho nhanho maitiro gwara rataurwa pazasi izvo zvinoita kuti basa rako rive nyore.
Nhamba huru yesarudzo dziripo paunenge uchitsvaga gore masevhisi. Saka kusarudza iyo chaiyo inodiwa iyo inotsamira pane akati wandei. Kana iwe uine chaiyo gore mupi mupfungwa, zvibvunze mimwe mibvunzo usati wasarudza sarudzo.
Inonyanya kuzivikanwa gore sevhisi Amazon Web Services sezvo ndivo vakatanga kugadzira gore kadambari a commodity. Mushure meizvozvo, kune makuru It makambani akadai Azure (mhanyisa Microsoft), GoogleIBM, nezvimwewo
Kana wangosarudza a gore mupi, inguva, kutanga nekugadzirira. Kuronga kwakafanira kunofanirwa kuitira kuti iwe unoshanda uende nenzira kwayo.
Computing nharaunda chikamu che gore server migration iyo inomhanya zvakasiyana pane yako ikozvino inoshanda sisitimu. Masevha, network uye data masevhisi ese anomhanya uye anodyidzana zvakasiyana, uye iwe unofanirwa kuve nechokwadi kuti unovandudza zvikamu zvehurongwa hwako kuti ugadzirire shanduko iyi.
Chikonzero chikuru chekutama ibasa rekuita. Asi application haingogara ichimhanya nekukurumidza mu gore. Kana uchichinja kuenda kunzvimbo yakagoverwa zvisingatarisirwi mabhodhoro anogona kuitika.
Kushandisa sevhisi itsva pa gore:
Kugadziridza iyo itsva sevhisi pa gore unofanira kushanda
Nzira dzakasiyana dzichashandiswa pakukopa zvichienderana nehukuru hwenyu Database uye kushandisa. Kana iwe usina ruzivo rwakawanda rwekutama saka zvinhu zvinogona kuitwa pamusoro pe Indaneti kubatana. Pamabasa makuru, izvi hazvina kukurudzirwa zvachose.
chibatiso panguva yekutama
If chibatiso inyaya hombe paunopinda muzone ye gore zvino inofanira kunge yakakosha sekutumira ruzivo rwese uye kodhi kune iyo gore. Kunyange nzvimbo yekuchengetedza kwenguva pfupi inofanira kuva chengetedzo kune ruzivo rwakashata rwakafanana nenzvimbo yekupedzisira.
Kufambisa a Database inogona kunge isinganyanyi kuvhiringa sezvo ese maturusi ane chaiyo kushanda uye miganhu. Saka enda saizvozvo. Bvunza nyanzvi usati wapinda muchirongwa kuti uite sarudzo ine hungwaru.
Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti maapplication auri kushandisa haavharwe pairi gore. Dzinofanirwa kunge dzichitakurika. Nyaya iyi inowanzo buda nemetadata.
Unogona here ese ako admin maturusi anonyatso tarisa iwo matsva gore app zvakanaka?
Saka kuenda ku gore iri nani, rinokurumidza sevhisi nemari shoma asi zvinogoneka chete kana matanho ese aitwa nemazvo. Kana uchida rubatsiro mukati gore kutama taura nesu nhasi. Kuva shamwari nemukuru gore vanopa masevhisi vakatibatsira kuwana hunyanzvi hwepamusoro mumunda. Bata nhasi kuti uwane kubvunzana kwemahara nenyanzvi dzedu.